တရုတ်နိုင်ငံက ရထားလမ်းစီမံကိန်းအသစ် နှစ်ခု ခွင့်ပြု - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးစီမံကိန်းက စုပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ယွမ် ၂၃၈.၂၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၇.၄ ဘီလီယံခန့်) အား ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ထျန်းကျင်းမြို့နှင့် အရှေ့ပိုင်း ဝေဖုန်းမြို့အား ချိတ်ဆက်ထားသော မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းတစ်ခုနှင့် အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ရှီးအန်းမြို့နှင့် အနောက်တောင်ပိုင်းရှိ ချုံချင့်မြို့အား ချိတ်ဆက်ထားသော ရထားလမ်းတစ်ခုတို့ ပါဝင်ကြောင်း အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်အရ သိရသည်။
မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း ၂,၁၆၈ ကီလိုမီတာပါဝင်သော စုစုပေါင်း အရှည် ၄,၂၀၈ ကီလိုမီတာရှိသော ရထားလမ်းအသစ်များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယမန်နှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းက တရုတ်နိုင်ငံ၏ မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းကွန်ရက်သည် ကီလိုမီတာပေါင်း ၄၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း အဓိကစီမံကိန်းကြီးများအဖြစ် စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
China approves two new railway projects
BEIJING, Jan. 15 (Xinhua) — China’s top economic planner has approved two railway projects, withacombined investment of 238.26 billion yuan (about 37.4 billion U.S. dollars).
The projects include one high-speed rail track connecting north China’s Tianjin and Weifang in east China, and one linking Xi’an in the northwest and Chongqing in the southwest, according to the National Development and Reform Commission.
Earlier data showedatotal of 4,208 kilometers of new rail lines were put into service in 2021, including 2,168 kilometers of high-speed tracks.
By the end of last year, the operating length of China’s high-speed railway network exceeded 40,000 kilometers, as major projects began operations as scheduled. ■